Xoogaga Al-shabaab ayaa la wareegay qeybo kamid ah degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ka dib markii ay galabta ku soo qaadeen weerar culus oo isugu jiray qaraxyo ismiidaamin ah iyo dagaal toos ah – Xeernews24
Xoogaga Al-shabaab ayaa la wareegay qeybo kamid ah degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ka dib markii ay galabta ku soo qaadeen weerar culus oo isugu jiray qaraxyo ismiidaamin ah iyo dagaal toos ah
18. Oktober 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Ka dib dagaal qaraar oo galabta illaa caawa maqribkii socday ayaa xoogaga Al-shabaab waxaa u suuragashay iney qabsadaan xarumo muhiim ah oo ay ka mid yihiin saldhiga booliska iyo xarunta maamulka degmada Afgooye oo ku yaala bartamaha degmadaas.
Ciidamadii dowlada ee ku sugnaa gudaha degmada Afgooye ayaa la soo sheegayaa iney afgooye uga soo baxeen dhinaca wadada soo aada magaalada Muqdisho.
Xoogaga Al-shabaab ayaa gaadiid qaraxyo laga soo buuxiyey ku dhuftay saldhigyo ciidamada dowlada iyo AMISOM ku leeyihiin degmadaas gaar ahaan agagaarka buundada u baxda dhinaca degmada Wanle-weyn.
Goob joogayaal aanu telefanka kua xidhiidhnay ayaa inoo sheegay in inta badan degmada Afgooye ay u gacan gashay xoogaga Al-shabaab oo jihooyin badan ka soo weeraray, waxaaa la soo sheegayaa in meydad badan ay daadsan yihiin meelo badan oo ka tirsan gudaha degmadaas oo illaa galaba lagu dagaalamayey.
Afhayeenka ciidamada AMISOM Joe Kibet ayaa sheegay iney ka war hayaan dagaalka lagu soo qaaday degmada Afgooye, ayna halkaas u direen ciidamo dheeraad ah oo u gurmanaya Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada.
Inkastoo markii la soo gaaray salaadii maqrib ee caawa uu waxoogaa qaboobay dagaalka ayaa haddana dadka degaanku waxay sheegayaan in weli rasaas goos goos ah ay maqlayaan, aysana jirin cid gurigeeda ka bixi karta.
Warar ku dhow dhow dowlada Somalia ayaa waxay sheegayan in ciidamo ka tirsan milateriga iyo kuwa nabad sugida ay ka dhaqaaqeen magaalada Muqdisho iyagoo aaday dhinaca degmada Afgooye si ay u xoojiyaan ciidamada dowlada ee halkaas ka dagaalamaya.
Xaalada degmada Afgooye ayaa cakiran, iyadoo xiligu uu habeen sii galayo, lamana oga illaa khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkan galabta ka dhacay degmadaa oo qiyaastii 30km koonfur kaga toosan magaalada Muqdisho.
Al-shabaab ayaa war soo saartay ku sheegtay iney guud ahaan la wareegeen degmada Afgooye ka dib dagaal ay la galeen galabta ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dagaalku uu haatan ka socdo agagaaarka saldhiga ciidamada AMISOM ku leeyihiin Afgooye oo ku yaalla agagaarka buundada weyn ee degmadaas.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/09/1c9e63803d226c5a173c.jpg 410 750 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-18 18:39:522016-10-18 18:39:52Xoogaga Al-shabaab ayaa la wareegay qeybo kamid ah degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ka dib markii ay galabta ku soo qaadeen weerar culus oo isugu jiray qaraxyo ismiidaamin ah iyo dagaal toos ah
Nin Walba Tebinadi Ridayee Ma anaa Tol Laawa ah Turkiga oo Sir Aan Caadi Aheyn usheegay Shacabka Dunida ku kala Sugan